musha UNITED UMAMBO FOOTBALL STORI Vatambi Vanotamba Yevatambi Adebayo Akinfenwa Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhola Genius inonyatsozivikanwa neNickname; "Chikara". Our Adebayo Akinfenwa Childhood Indaba pamwe Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazita, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvisinganyatsozivikanwa pamusoro pake.
Hungu, munhu wose anoziva nezve simba rake remuviri uye muviri wakaoma kuvaka asi asi vashomanana vanofunga nezveAdebayor Akinfenwa's Biography iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Adebayo Akinfenwa Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Saheed Adebayo Akinfenwa akaberekwa musi we 10th waMay 1982 muIslington, United Kingdom. Akazvarwa kuna baba vechiMuslim uye amai vechiKristu.
Chimiro chaAkinfenwa chekunyengedza kunyange sekunge mwana akamutora zita rezita 'Chikara'. Kare kumashure semucheche, akanga ari fan guru reLiverpool. Mutambi waaida zvikuru aiva John Barnes. Akamboti ... "Kare kare, ndaigara ndichida shati yaSteven Gerrard. Ndaimboudza shamwari yangu kuti kana munhu akawana shati yake pamberi pangu, tichava nechinetso. " Asingafungi, akawana shati.
Chimiro chake chekudzingira hachina kugara chiri chikomborero, zvisinei, uye kazhinji kacho chakava mutoro munguva yehuduku hwake. Kubva kubva pazera remakore, chibereko cheNigerian Yoruba nhaka uye paudiki hwezvokudya zvakagadzirisa zvakaita Akinfenwa akaedza kuti vanhu vaone kupfuura hukuru hwake.
Paaiva achiri kuyaruka, akapinda muchikwata cheLithuanian chikwata cheFK Atlantas pazano remugovereri wake, uyo mudzimai wake wechiLithuania akaziva nhengo yevashandi vekudzidzisa ikoko. Akagamuchira kushandiswa kwemadzinza kubva kune vateki. Mumashoko ake ...
"Mumutambo wangu wekutanga wekutanga wekanguva ndakanzwa" Zigga, Zigga, Zigga, kuuraya f ****** n ***** ". Ndakanga ndiri 18 uye ndinorangarira ndichifunga kuti chii chandine ini, "anodaro. 'Imwe nguva, musikana ane makore gumi nemana anonzi 11 akakwira kwandiri ndokuti' Hitler akadurura pfupa yakasviba pa FACE yangu '. Ndakadana mukoma wangu mukuru Yemi ndokuti 'Ndiri kuenda kumba. asi akati: 'Unogona kudzoka kumba uye uvarega vachikunda kana kugara uye avaratidze zvauri kuita. Mushure mokunge ndapedza gore iroro, ndakafunga kuti hapana chinhu chandisingakwanise kukunda mubholabhoza. "
Kusarura kusarura kwakaita kuti Akinfenwas adzokere kuUn early in 2003. The 'Chikara' akazova mufambiki pashure. Akabatana neWelld Premier League mauto eBarry Town achivabatsira kukunda Welsh Cup uye Welsh Premier League silverware munguva yake paJenner Park. Kunyange zvakadaro, ruoko rwakazara rwemakwikwi mumutsara wake, kirabhu yakatambura nedambudziko rezvemari uye yakabudisa vashandi varo vemauto. Akashandisa zvikwata zve10 mumakore masere, kusanganisira vana mugore rimwechete. Munhu anofamba basa.
Kubva panguva iyo, Adebayor Akinfenwa akachezera 12 makambani anocherechedza zvinangwa zve 204 muzviratidzo zve 631. Vamwe vose, sezvavanotaura, iko zvino nhoroondo.
Adebayo Akinfenwa Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Nepaparazzi nguva dzose pazvakawanda uye nzira dzakawanda dzekubatana nehupfumi, zvinogona kuva zvakaoma kuchengetedza hupenyu hwako kure nemeso evanhu. Izvi ndizvo zvakaitika kuna Adebayo Akinfenwa uyo asingambobvumiri mudzimai wake kuenda naye kumagariro evanhu uye kuenda kumapato ekupedzisira. Hakuchina zvinyorwa zvehukama hwekare (musikana nemudzimai) paIndaneti. Pasinei naizvozvo, Adebayo Akinfenwa anoshandisa vana vake kuti nyika izive kuti ndiye baba vakanaka. Izvi zvakaratidzwa sezvaakamboisa mufananidzo wekupfekedzwa saBaba VeKrisimasi yevanasikana vake.
Adebayo Akinfenwa anozivikanwawo kuti ndibaba vanopedza nguva yakaisvonaka vachiumba mwanakomana wavo mumufananidzo wake uye zvakafanana. Mwanakomana wake uyo anozivikanwa kusimudzira mini uremu anonzi ane mababa ababa vake 'mini beast'.
Kutumira pedyo nemifananidzo yakanyorwa 'baba nemwanakomana', Akinfenwa akanyora kuti: 'Handimbokwanisi kutanga (sic) nokukurumidza ndinofungidzira. Akatora my Lil murume ku2nd yangu office #MiniBeastInTraining. '
Adebayo Akinfenwa Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Akinfenwa akaberekerwa baba veMuslim uye amai vechiKristu.
"Ramadhan paakanga aripo, baba vakatiita kuti tinyatsokurumidza uye ipapo, zvinhu zvakashanduka apo ndakatanga kuverenga Bhaibheri mazuva ese uye kuenda kuchechi. Yaiva kutenda kwamai vangu kwandakaswededzwa. Ini zvino ndaverenga Bhaibheri zuva rega rega uye ndoenda kuchechi musi weSvondo rese. " Anoti Akinfenwa.
Nhasi, ari muKristu anoita basa anoverenga Bhaibheri zuva rega rega uye anoenda kuchechi musi weSvondo woga woga, uyo anokwikwidza anoti chitendero achabudirira, zvisinei nokuti chii chinobva kuna Mwari uye muenzaniso wevabereki vake. Ane hama dzinonzi; Dele Akinz uye Yemi. Pasi pane mufananidzo waDuse uyo muimbi.
Akatora chinyorwa ichi chiri pamusoro apa; 'I & @delemusic ichangopedza muimba yekurovedza & u inogona pachena kuona kuti umwe wei akauya kune work out & which one, came to pose. Haana gonhi rekutuka pa #GymBuddy. '
Akawanda makamburu ekoro uye mauniversity eAmerica akasangana nhengo dzemhuri yake kuti aite Akinfenwa kushandura mitambo nekuda kwehukuru hwake nesimba. Izvi, zvisinei, zvakawira pamakanzwa matsi.
Adebayo Akinfenwa Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Warned Diego Costa
Akaudza Diego Costa .."Kana pane murume mumwe chete iwe usingadi kutsamwa, ndiyo 'Chikara. Ini ndaifanira kuichengeta chaiyo. Kana ikasvika kune iyo ndinofanira kudonhora Diego Costa. Ndinomuda semutambi asi pane mumwe chete anokunda kana akauya kuzorwa neni."
Adebayo Akinfenwa uyo aida nguva imwe chete kumutungamiri weSteven Gerrard fan club, Adebayo Akinfenwa, akanyevera Diego Costa pamusoro pehupenyu hwake hwomunguva yeElverpool. Mu Instagram Post yake ...
Adebayo Akinfenwa Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Murume Akasimba Kwazvo MuBhora
Akinfenwa ava kunyatsozivikanwa nokuda kwekutsvaga sevane simba kwazvo mubhokisi munyika yose muzvinyorwa zvakasiyana zveFIFA video game series. MunaSeptember 2014 akakokwa kuti apinde mutambo wekutanga FIFA 15 pamwe nevarwi vakasiyana-siyana uye Premier League vatambi vakadai seRio Ferdinand, George Groves uye Lethal Bizzle.
Akinfenwa anonzi akayera pfudzi ye 16 (101 kg) uye anogona kuita bhenikeri 200 kg, inenge kaviri mumuviri wake. Anomhanya chikwata chokupfeka chinonzi Bhiza Mode On iyo inotamba pamusoro pemukurumbira wake ane simba.
Adebayo Akinfenwa Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Akafuridzira 39,000 tweets
Munguva yemumwe musi weMuvhuro usiku weFIFA Cup, pakanga pane kuvhara 39,000 tweets zvine chokuita naAkinfenwa. #BeastMode yaiva yehushtag yechitatu-yakakurumbira sezvo Twitter yakashata nokuda kwechigamba chechitendero cheWimbledon.
"Bhiza Mode On ndiyo mamiriro ekufunga," akatsanangura kudaro. "Bhidha Mode ndeyekuzvishandura iwe nekuzvidza kukanganisa kwevanhu vanokuisa."
Paanenge asingatyisidzi League League-backs, Akinfenwa anowanawo nguva yekushandira chigamba chemucheka chinotakura 'Bhiza Mode' zita.
Adebayo Akinfenwa Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -FIFA Rank Fumming
ADEBAYO AKINFENWA akasiyiwa akatsamwa mushure mekunge ataurirwa Fifa 18. Akapiwa chiyero che 98 kunze kwe99 chakaita kuti vamwe vatsamwe. Akinfenwa akati: "Saka iwe une nguva yakanaka uye iwe uende pasi - tarisira, chaizvoizvo. 18 zvinangwa zvekupedzisira kwemwaka uye 50-mitambo isina kunaka - inoremekedzwa kupi ?. " Akinfenwa akakunda kupikisana naChristopher Samba uyo aiva wechipiri, Oguchi Onyewu (wechitatu) naKendall Watson (wechina) semutambo wakasimba kwazvo. Akabva aisa vhidhiyo pa Twitter kubva kwaari achisimudza zvigadzirwa kuti arambe achiratidza pfungwa yake.
Akaisa EA Sports mu tweet ndokunyora kuti: "Yo @EASPORTSFIFA chii hama yaifanira kuita kuti iwane 99strength #BMO #Fifa18 #ComingForFifa19."
Adebayo Akinfenwa Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Anoyera ibwe 16
Akinfenwa ndiye 5ft 11 mukati asi anorema pane rimwe dombo re16 kana 102kg. Ndiyo BMI ye31.3 kana kuti yakakomberedza kuenzana kwemuviri seEngland rugby hooker Tom Youngs. Chimiro chake chakanaka uye chakakomberedzwa chinomuswededza kure nechiseri, chimiro-sechimiro cheimwe munhu akafanana Cristiano Ronaldo.
Anoti akambove a "Naturally big guy", uye akatotambura kuti atore mabhizimusi emutambo kuti amutore zvakanyanya. "Vanhu vakati ini ndiri mukuru zvikuru kutamba bhora," akati. "Zvinangwa zana gare gare, handisi. Izvo hazvina kukwana pane zvaunoda kuita. "
Adebayo Akinfenwa Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Anokwanisa bench-press 180kg
Ane chido chokusimudza masero akaremara uye anobvuma kuti vatungamiriri vekare vaifanira "Kumudzorera" kumumisa kuti apedze nguva yakareba muimba yekurovedza.
Simba raAkinfenwa rave richizivikanwa nemitambo yeFifa yemitambo yemavhidhiyo, iyo yakamuona iye anonyanya kukwikwidza mutsara munyika, ane simba re97 kunze kwe100.
Adebayo Akinfenwa Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Anokanganisa vatambi veNFL
Akinfenwa anowanzozivikanwa sebhokisi. Haisi nguva dzose seyakanaka yemutambo. Mutsoropodzi anobvuma kuti akambodzingwa nemapurisa akamutora kuti ave mutambi muNFL yeAmerica.
Akinfenwa aifara kuisa yakananga mhangura, achimuudza kuti: "Ndiri kutamba nemutambo wakakodzera."
CHOKWADI KUTI: Tinovonga nekuverenga Adebayor Akinfenwa Childhood Story pamwe ne Untold Biography facts. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!.